ဟေရှာယ ဟောခဲ့တဲ့ခေတ် အခုခေတ်ပါ။ ၁၂နှစ် ဘယ်နှစ်တန်းလဲ ၇တန်း ဆိုတော့ တော်တော်တတ်နေပါတယ်။ ပညာလို့မပြောပဲ သင်ညာလို့ ပြောချင်ပါတယ်။ အရေးအကြောင်းရှိတော့ စာရေးတတ်ပေမဲ့ လျှောက်လွှာတောင် မရေးတတ်။ စွတ်ရေးပြီး ဆိုင်းထိုး တင်ကြတယ်။ ကျမ်းစာကို ရွတ်တော့ အစအဆုံး ရွတ်တတ်ပြီး အဓိပါယ်နားမလည်။
ဒီမှာရှိတဲ့ ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေကို အင်မတန်သတိပေး အလေးထားပြောချင်ပါတယ်။ နှုတ်ကပါတ်တော်ကို မထီမဲ့မြင် ပြုတဲ့သူများ အလွန်များပြားလှပါတယ်။ ဘုရားသခင်ရဲ့ နှုတ်ကပါတ်တော်ကို အလေးထားဖို့လိုပါတယ်။ အလင်းပေးနိုင်တဲ့ ကိုယ်တော်မြတ်ကိုယ်တိုင် ကြွလာပါမယ်။ ကျမ်းတတ်တွေတောင် အာရုံမပြုတဲ့လူတွေ .. မထီမဲ့မြင်ပြုသူတွေ ပျက်စီးတတ်တယ် .. မယုံသောသူမှာကား ယခုပင် စီရင်ခြင်း ခံရနိုင်တယ် ..လို့ဆိုပါတယ်။ လောကအာရုံ များနဲ့ အပျော်ကြူး ..မူးရစ် ..ကြောက်စရာများပါ။ အနာဂါတ်အတွက် မပြင်လိုသည်သာမက မပြင်ချင်တဲ့လူတွေ ..
နှုတ်ကပတ်တော်ကို လက်ခံသောသူ ဘုရားသားသမီးများ ဖြစ်ပါတယ်။ မထီမဲ့မြင်မပြုကြပါဘူး။
ဟေရှာရ ၅၆ အစားရှောင်၊ ခြိုးခြံစားကျင့်ရင် ထာဝရဘုရားနှစ်သက်တော်မူမလား..ထာဝရဘုရားနှစ်သက်တော်မူခြင်းက ငတ်မွတ်သူများကို ဆင်းရဲသားသူတွေ မုဆိုးမများ အားလုံးတို့ကို စောင်မကြည့်ရှုခြင်းက အစာရှောင်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ရွှေပြည်သာနဲ့ပတ္တမြား တို့မှာ ထမင်းရည် ၅၀သား လာရောင်းတာ ၀ယ်သူမရှိလို့ ပြန်လာရတယ်။ ကံတရားနဲ့ပြောရရင် အတိတ်ကံပေါ့..ဘုရားနဲ့ပြောရရင် အခွင့်အရေးပါပဲ.. မနိုင်တနိုင် ထမ်းစရာမလိုပါဘူး။ ခေါ်ကြွေးရင် အများကြီးလာကြမယ်။ တယောက် နှစ်ယောက်ပဲ တိတ်တိတ် ခေါ်ကြွေးကြည့်ပါလား အော်မပြောပဲ မနေဘူး အများကြီးလာကြမှာပဲ။ ဘုရားက မနိုင်တဲ့ဝန်ကို မထမ်းဖို့ပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်နဲ့စပ်ဆိုင်သူ များကို ကြည့်ရှုဖို့ ဘုရားအလိုရှိပါတယ်။
ဆရာကြီး အိမ်နောက်ဖေးခေါ်ထား ပြန်ထုတ်ဖို့ကြတော့ တောင်းတောင်းပန်ပန် ငွေပေးပြီး ထုတ်ရတယ်။ ငွေလိုနေတာ မဟုတ်ဘူး။ ငွေရှိတဲ့လူနဲ့ စီမံခန့်ခွဲတဲ့လူ ပေါင်းပြီး လုပ်ရမဲ့ အခြေအနေပါ။ ဂရုဏာ သုတ္တံ၂၈ .. ဆင်းရဲသားတို့အား စွန့်ကြဲသူ ကိုယ်တိုင်မဆင်းရဲပါဘူး တဲ့။ စိုက်လိုက်တဲ့ အပင် ၁၀လုံးထက် ပိုမသီးပါဘူး။ စောင်ကြည့်ရပါတယ်။ နောက်နှစ် အလုံး၂၀၊ နောက် နှစ် အလုံး ၃၀ ဖြစ်လာတယ်။ ဒီနေ့လဲ ဒီလိုပါပဲ။ နည်းနည်းလေး အာရုံစိုက်ဖို့ လိုပါတယ်။ ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ဖက်က ထိမ်းပေး၊ စောင့်ပေးရင် တော်တော်များများဟာ ကောင်းကြီးပေးမယ်။ ဒီကိစ္စ သူဌေးတွေ လုပ်လို့မဖြစ်၊ အများနဲ့ လုပ်ရပါမယ်။ တယောက်ခြင်း အိမ်ဘေးကလူကို မစ သွန်သင်ရင်း လုပ်ရပါမယ်။ ဆာလံဆရာကလဲ ဆင်းရဲသူကိုပေးကမ်းခြင်းက ထာဝရဘုရားကို ချေးငှားခြင်းဖြစ်တယ် ..တဲ့။ အတိုးပါပြန်ရမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဲဒီ ဒုက္ခသည်ကို ပေးကြည့်ပါ။ အံ့သြစရာ ကိုယ်တိုင် မဆင်းရဲရ ဆိုတာ ခံစားရပါမယ်။
ကယ်တင်ခြင်းရပြီး သမ္မာတရားကို ရဖို့လိုပါတယ်။ အများက တရားတော့ ရတယ် မေတ္တာတော့ မရှိဘူး။ စိတ်ပျက်စရာဖြစ်အောင် စာတန်က လုပ်ပါတယ်။ ဓမ္မ တတိယ အခန်း၁၇ မှာ ဧလိယကို မုဆိုးမဆီကို လွှတ်တယ်။ မုဆိုးမက ၀လင်စွာ စားဖို့အရေး သူ့မှာရှိတာကို အရင်ပေးရတယ်။ နေ့စဉ် ၀လင်စာစားရအောင် ဘုရားလူကို ပေးရတယ်။
ဒီနေ့ သိပ်ချမ်းသာလို့လဲ မဖြစ်ဘူး။ သိပ်ဆင်းရဲလို့လဲ မဖြစ်ဘူး။ ဘုရားသခင်က ဖူလှုံသော အစာအဟာရနဲ့ မိုးလုံအောင် နေရဖို့ အလိုရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် နှုတ်ကပတ်တော်ကို မထီလေးစား မလုပ်ရအောင်
ယော ၁၄ မှာကြည့်ရင် ..ငါ့ပညတ်တော်ကို စောင့်ရှောက်သူ ငါ့ကိုချစ်သောသူ ဖြစ်သည်။ ငါ့ခမည်းတော်ကလည်း ချစ်မယ်။ သူ့အပေါ် ကိုယ်တော် ထင်ရှားစေမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ မနိုင့်တနိုင် သူများ ချီးမွမ်းစေအောင် မလုပ်ဖို့၊ နိုင်သလောက်ပဲ လုပ်ပါ။ မစပြီး ဆုတောင်းပါ။ ပေးနိုင်သူကို ချဉ်းကပ်ပါ။ အသင်းတော်ကို ပြောပါ။
အသင်းတော်ကလဲ တ၀က်လောက် လေလွင့်တယ်။ ဆေးရုံတက်ရတယ် ဆိုပြီး ပေးလိုက်တယ်။ တကယ်ဆေးရုံမတက်ဘူး ..နောက်မှသိရတယ်။ (ဇီးသီးဗန်း)။
ငါသည်လည်း သူ့ကိုချစ်၍ ကိုယ်တိုင်ထင်ရှားမည် တဲ့။ စကားနားထောင်ခြင်းနဲ့ စရပါတယ်။ သင့်အပေါ်မှာ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ တဲ့။ လမ်းမှာ တောမှာ ချက်ပြုတ်တဲ့နေရာမှာ မင်္ဂလာရှိပါတယ်။ အမှုဆောင် ကလေးလေးတွေနဲ့ သူ့မိန်းမက သိပ်စေတနာရှိတယ်.. စားသွားအုန်း … ဘာရှိသလဲ.. ငပိရည်..အိမ်အောက်က တို့စရာလေးတွေ ..ငြုတ်သီး တမတ်ဖိုး (အဲဒီခေတ်က) ကြွေးတယ်။ မိန်လိုက်တာ။ မင်္ဂလာရှိတယ်။
သူများတွေ ငတ်နေတဲ့အချိန်မှာ ပြုံးနေနိုင်ပါတယ်။
မျက်စိရှင်၊ နားရှင် ကြည့်ရင် ကိုယ်တော်နဲ့သွားရတာကို သက်သေရပါတယ်။ ကယ်တင်ခြင်း စိတ်ချပါတယ်။ ကိုယ်တော်နဲ့ နေ့စဉ်သွားလာရတဲ့ သက်သေကို ရပါတယ်။ ကိုယ်တော်က ပေးလိုက်ဆို ပေးရဲတာပေါ့။ ပေးရမလား မပေးရဘူးလာ မဖြစ်တော့ပါဘူး။
ယာကုပ် ၂ မှာ ပေးကမ်းတဲ့အခါသက်သေ ဖြစ်ရပါတယ်။ ညီအစ်ကိုမောင်နှမ အ၀တ်ချည်းစည်းဖြစ်ပြီး စားစရာမရှိတဲ့အခါ သူတို့ကိုယ်နှင့်တော်လျော်သော အ၀တ်အစားပေးဖို့။ အကျင့်နှင့်ကင်းသော ယုံကြည်ခြင်းမဖြစ်ဖို့ပါ။
ယုံကြည်ခြင်း (၂)မျိုး
၁။ ကျေးဇူးမင်္ဂလာကို ယုံကြည် (ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်မည်)
၂။ ခရစ်တော်ရဲ့ မစနိုင်ခြင်းနဲ့ဂတိတော်ကိုယုံကြည်ခြင်း (ရှင်သန်ခြင်းနဲ့အကျိုးကျေးဇူး ၊ အသက်တာ)
ကောင်းသောအကျင့်နဲ့ အသက်ရှင်ဖို့ ဆိုရင်တော့ ကိုယ်နဲ့စပ်ဆိုင်သူကို မစဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါကြောင့်ကိုယ်တော်ပြောတဲ့ ဂတိတော်ကို ယုံရပါမယ်။
နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ဦးစွာရှာလော့၊ နောက်မှပေးတော်မူလတံ့ ..ဆိုတာကို ယုံရပါမယ်။
မစတဲ့အခါ ဘယ်လိုလူမျိုးကို မစရမလဲ?
ဘုရားက မစခိုင်းသော်လည်း အကျိုးမဲ့အောင် မစခြင်းမဖြစ်စေရပါဘူး။ ဒါအရေးကြီးပါတယ်။ ခရစ်တော်ကိုယ်နှိုက်က တောင်းသမျှ ပေးတာက ပထမအကြိမ် .. ခလေးကဲ့သို့တောင်းခြင်း ..သက်သေထူးခြင်းဖြစ်သည်။
ဒုတိယအဆင့်မှာတော့ အလိုတော်နှင့်ညီသောဆုကို တောင်းမှ ပေးမည်။ နောက်ပိုင်းကျတော့ တောင်းတိုင်း မပေးတော့ပါဘူး။ အလိုတော်ကိုသိရက် ဇာတိကို ဦးစားပေးပြီးတောင်းတယ်။ မပေးဘူး။
ဓါးပြ၂ယောက်၊ တယောက်က သင်သည် ခရစ်တော်ကို ပြောတယ်. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကယ်ပြီး ငါတို့ကိုလဲကယ်ပါ၊ ဒါဆိုရင် ယုံမယ်ပြောတယ်။ ကိုယ်တော် အဲဒီလိုဓါးပြ ဘယ်တော့မှမယုံပါ။ ခရစ်တော် လာတာ သူ့ကိုယ်ကို ကယ်ဖို့မဟုတ်ဘူး… အခြားသူကို ကယ်ဖို့လာတာပါ။
ငါတို့သည် အလိုတော်နှင့်အညီ တစုံတစ်ခုသော ဆုကိုတောင်းလျှင်ပေးမည် ..တဲ့။ မြည်းစမ်းကြည့်တာတော့ တောင်းရင်ပြီးပါတယ်။ ဘုရား တန်ခိုးရှိမှန်း၊ သစ္စာရှိမှန်း သိပြီးသားပါ။ ဒါကိုသိရက်နဲ့.. ကိုယ့်ဆန္ဒ ဖြစ်ချင်တာနဲ့ တောင်းတာမျိုး .. ဆင်းရဲသားကိုပေးတာ အလိုတော်ရှိသလား ..ရှိပါတယ်။ မစလိုတဲ့ စိတ်ထားတဲ့ ပေးကမ်းရင် ဘုရားသခင်နှစ်သက်ပါတယ်။
တမန်တော်ဝတ္တုမှာ .. ဤလက်တို့သည် ငါ့အပေါ်၎င်း၊ ငါ့အပေါင်းဖော်တို့ကိုသော်၎င်း … အစွန့်ကျဲခံခြင်းထက် စွန့်ကျဲခြင်းက သာ၍ကောင်းသည်။ အလုပ်လုပ်ပြီး မလောက်တဲ့လူကို ပေးဖို့ ပေါလု ပြောတာပါ။ အလုပ်မလုပ်ပဲ အချောင်လိုသူကို မပေးပါနဲ့။ ပစ္စည်းစောင့်ခိုင်းပါလား အဲဒီပစ္စည်းတွေ ရောင်းစားတယ်။ အဆိပ်ပင် ရေလောင်းသလိုပါ။ အလုပ်လုပ်ပေမဲ့ မလောက်သူ.. သစ္စာနဲ့လုပ်နေပေမဲ့ မလောက်တဲ့လူကို ပေးပါ။ အဲဒီလူကို ပေးပါ။ ဘုရားသခင်ရဲ့အမှုဆောင်ဖြစ်ပြီး ပေါလုက ပြန်ပေးတယ်။ အလုပ်လုပ်သော်လည်း မရတဲ့လူကို ပေးပါ။
ကျနော်ရဲ့ ပြဿနာတစ်ခုပါ။ အချို့သော ဖခင် များ၊ သူကတော့ အရက်မူး လမ်းမှာလဲနေတတ်..သားသမီးများကိုပေးလဲ သူက ယူပစ်လိုက်တယ်။ နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ အညီ ပေးကမ်းတတ်ဖို့ပါ။ အဲဒီလူမျိုး ..၊ တပိုင်းက၀မ်းနည်း . တပိုင်းကတော့ ကျနော်အတွက် အခွင့်အရေးပါပဲ...ကလေး၎ယောက် ကိုသနားတယ်… အဖေက ခရစ်ယန် ထွက်ပြေးသွားတယ်.. ဘကြီး ဆိုပြီး လာတယ်၊ မကြည့်ရက် မြေးလေးတွေလဲဖြစ်တယ်။ အဲဒီ ၄ယောက်က စတယ် .. တဖြေးဖြေး များလာတာ အခု ၄၄ယောက် ဖြစ်လာပြီ။ နောက်တယောက် အမှုတော်ဆောင် အသဲကင်ဆာဖြစ်တယ် . ဆရာဝန်က လက်ရှော့ကျနော်ကို လာအပ်တယ်။ ရတယ်။ ကလေးနဲ့ဇနီးသည်ပါ ထားခဲ့တယ်။ ရပါတယ်။ တချို့သူတွေက ခဏလေးထားခဲ့မယ် နော် ပြောပြီး ပြန်မလာတော့တဲ့ အမှုတော်ဆောင်လဲ ရှိတယ်။
ငါ့ထမ်းပိုးသည် ပေါ့သည်။ လေးနေရင်တော့ နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ မညီပါဘူး။ တယောက်ထဲ မထမ်းပါနဲ့။ အဖွဲ့အစည်းနဲ့ ထမ်းပါ။ တမန်တော်ကြီးက မူချပေးထားပါတယ်။ အချင်းချင်းကူညီ ထမ်းရွက်ခြင်းနဲ့ ခရစ်တော်၏စကား.. ကိုယ်၌သာ ၀ါကြွားလိုချင်းဖြစ်မသွားအောင် .. စာတန်လှည့်စား မသွားအောင် ..သတိထားဖို့လိုပါတယ်။ ထမ်းရွက်ဖို့လိုပါတယ်။ လူအသီးသီးတို့သည် မိမိတို့ဝန် မိမိထမ်းရမည် .. တဲ့… ထမ်းရွက်ပါရက်နဲ့ မနိုင်မနင်း ဖြစ်နေသူကို မစဖို့လိုပါတယ်။ မထမ်းချင်လို့ လာကူညီခိုင်းသူမျိုးတော့ မဖြစ်စေရပါဘူး။ ဒါကြောင့် မထမ်းနိုင်တဲ့ဝန်ကို ဘုရားက မထမ်းခိုင်းပါဘူး။
ဒီဒေသနာနဲ့ ဘေးမှာရှိတဲ့ ကလေးများကို ပေးကမ်းရင် နှုတ်ကပတ်တော်ကို ပြောပြပြီး ထားခဲ့ပါ။ နောက်လှည့်မကြည့်နဲ့တော့ တပြုံကြီး လိုက်လာလိမ့်မယ်။
ဒီတော့ .နှုတ်ကပတ်တော်ကို မထီလေးစားမလုပ်ပါနဲ့။ နားထောင်ကြပါ၊ နားထောင်နိုင်တဲ့ ဥာဏ်နံ့ အလက်ူ ကိုပေးတော်မူပါ။ ဘုရားသခင်ရဲ့ နာမတော် ထင်ရှားစေပါ။ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်ကြပါ။
သတင်းဆိုးများ ကြားရသော်လည်း ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထောက်ရှု၍ ကြည့်သောအခါ နောက်ဆုံးကာလနဲ့ ညီသလို တွေ့ရပါတယ်။ စိတ်လျှော့စရာ မဟုတ်ပါ။ ပတ်ဝန်းကျင် ဖြစ်နေတာကို တစ်ဦးချင်း လုပ်စရာမလိုပါ။ လုပ်ဖို့လဲ ဘုရားအလိုတော် မရှိပါ။ ယနေ့ ဒေသနာကို လက်ခံ လိုက်ရှောက်သူများကို အသုံးပြုတော်မူပါ။
ဘုရားသခင်ရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတော်၊ သားတော်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ ကျေးဇူးမင်္ဂလာနဲ့ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ ကယ်မစောင့်ရှောက်မူသော မင်္ဂလာအပေါင်းတို့ အစဉ်အမြဲတည်ရှိပါစေသော်။